Ihe na - emetụta Mmetụta Otu Peeji Peeji gị Ji rụọ ọrụ na Weebụsaịtị gị | Martech Zone
Ihe Ntuziaka Nke Na - emetụta Nsogbu Ngwa Page Gị Ji Arụ Ọrụ Na Weebụsaịtị Gị
Anyị na onye ahịa nwere echiche zutere taa ma na-ekwurịta ihe metụtara ya ọsọ ọsọ na ebe nrụọrụ weebụ. Enwere agha na-aga na rightntanetị ugbu a:
Ọbịa na-achọ ọgaranya anya Ahụmahụ - ọbụlagodi ngosipụta retina pixel dị elu. Nke a na-anya onyonyo buru ibu na mkpebi dị elu nke na-egbochi nha onyonyo.
Nchọgharị ọchụchọ na-achọ ultra peeji ngwa ngwa nwere ezigbo ederede nkwado. Nke a pụtara na bytes na-emefu ederede, ọ bụghị onyonyo.
A na-achịkwa ikike ọchụchọ ọdịnaya dị ịrịba ama. Na-enweghị ịkekọrịta ọdịnaya gị, ị belata ikike ya ịmepụta backlinks na amaokwu maka ọdịnaya gị… na-agbada nyocha ọchụchọ.
Ọ bụ mmezi maka ụlọ ọrụ ọ bụla, yabụ ka anyị gafere etu ibe peeji si arụ ọrụ na ebe ụzọ mgbochi ahụ nwere ike ịdị.
Infrastructure - Akụrụngwa nke oge a na-eji eriri maka njikọta ọsọ ọsọ, draịva siri ike, yana CPUs ọsọ ọsọ iji rụọ ọrụ ngagharị, sava igwe ojii na sava nchekwa data. Site na ugbu a, ịnwe saịtị gị na akụrụngwa ọhụrụ na ụlọ ọrụ ọhụrụ nwere njikọ dị elu ga-eweta nsonaazụ kacha mma.
Mkpebi ngalaba - Mgbe a rịọrọ peeji, a na-edozi ngalaba ahụ site na ihe nkesa aha. Arịrịọ ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, mana ị nwere ike ịkpụcha ntakịrị oge arịrịọ ahụ site na iji a jikwaa ọrụ DNS.
Njikarịcha data - N'ime usoro njikwa ọdịnaya nke oge a, ọ dị oke mkpa na nchekwa data gị ga-akwalite iji nwekwuo oge ọ na-ewe iji jụọ ma zaghachi data na nleta na-enweghị nchekwa. Ọ bụkwa ezigbo omume ịnabata nchekwa data na sava dị iche na sava weebụ gị mana n'otu gburugburu.
ibu ibu adịzi - Teknụzụ dị iji kesaa ọtụtụ sava iji kesaa ibu nke ndị ọbịa gafere ha kama itinye naanị ibu ahụ na sava. Nkà na ụzụ a na-enye ohere iji nọgide na-agbakwunye ọtụtụ sava na ọdọ mmiri gị ka ọchịchọ na-aga n'ihu na-eto eto… mgbe ụfọdụ na ezigbo oge.
Ibe akwukwo - pathzọ mgbe ngalaba gbara ajụjụ usoro njikwa ọdịnaya gị ma ọ bụ usoro azụmahịa iji nweta ọdịnaya. Ndepụta data data na ngwaike gị nwere ike imetụta ọsọ ọ na-ewepụta ọdịnaya ahụ.
Caching peeji nke - Ọtụtụ sava weebụ na-arụ ọrụ dị elu na-enye ikike ị gafere arịrịọ ahụ na nchekwa data ma jeere ọdịnaya site na oghere.
Isi Arịrịọ - N'ime ọdịnaya nke ibe, enwere akụ dị ka ederede na mpempe akwụkwọ ị rịọrọ tupu ewebata peeji ahụ na ihe nchọgharị ahụ. Ọtụtụ akụrụngwa nwere ike ịkwalite oge ibu peeji gị.
Peeji Ihe - Nchọgharị a na-eme ka arịrịọ laghachi na otu ihe nkesa na otu oge. Ọ bụrụ na enwere otutu ngalaba ma ọ bụ subdomains, enwere ike ịrịọ ihe n'otu oge. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-etinye ọtụtụ subdomains maka ederede, mpempe akwụkwọ, na mgbasa ozi iji nweta ụzọ nchọgharị si arịọ arịrịọ ndị a. Ọ bụrụ na ị na-ebugharị ọtụtụ ederede ma ọ bụ ihe ederede, ijikọta ha na obere faịlụ ga-eme ka arụmọrụ ka mma.
Nzipu Nwepụta ọdịnaya - Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ọdịdị ala na-ekere òkè na oge ọ na-ewe iji were saịtị gị. Ọ bụrụ na ị nọ nso na sava gị, ọ na-agba ọsọ. Ọ bụrụ na ị gafee kọntinent, ọ ga-adị nwayọ. A CDN nwere ike ibudata ihe oyiyi gị na mpaghara ma jeere ha ozi ngwa ngwa nye ndị na-ege gị ntị.
mkpakọ - Sava weebụ nke na-etinye mkpakọ gzip nke ihe ntanetị weebụ, ihe oyiyi ndị bụ tinye ya, scripts na CSS ndị e mere ka ha wepu ohere dịpụrụ adịpụ nwere ike ha niile nwere ezigbo mmelite na ọsọ ọsọ weebụsaịtị.
Obi umunya - Gini mere ichota onyonyo ma oburu na mmewere adighi ahu uzo? Ọ bụrụ n'ịchọta na saịtị anyị, ka ị na-agbadata ihu na ihu igwe, ihe oyiyi ahụ na-ebugo ozugbo ha kwesiri ịpụta anya karịa otu oge. Ikike umengwụ nwere ike ime ka ọsọ ọsọ weebụsaịtị gị ọsọ ọsọ.
Nbudata na -akpaghị aka - Ọ bụghị ihe niile ka edokwaa ozugbo na ibe. Ihe dị ka bọtịnụ nkekọrịta mmekọrịta, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ịdị nwayọ nwayọ ma na-atụ ụtụ na ihe nchọgharị. Ọrụ Nlekọta Tag nwere ike inyere gị aka na itinye ego mgbe ibe ahụ zuru ezu karịa ịkụda ya.
Ntinye ekwentị - Ntughari mmeghachi omume bụ, n'ụzọ ziri ezi, iwe niile ugbu a iji nye ahụmịhe onye ọrụ na-agbanwe agbanwe n'agbanyeghị nlele ngwaọrụ gị. Mana o nwekwara ike ime ka ị ghara ileba anya na ekwentị gị - ebe ọnụọgụ ndị ọbịa na-arịwanye elu.
Formdị vidiyo - Ọ bụrụ na ị gụnyere vidio vidio na saịtị gị, ị ga-achọ ijide n'aka na ha kachasị nke ọma ma jikọta ya maka ihe nchọgharị ọ bụla. Vidiyo na-ebudata ngwa ngwa nwere ike ịdọrọ oge ibu saịtị wee mebie ndị ọbịa gị.
Nke a bụ ihe ọhụrụ wepụtara infographic si Mmalite Amamihe na ebe nrụọrụ weebụ abụrụla maa abụba, na mmetụta.
Tags: asynchronous ibumkpakọnetwọk nnyefe ọdịnayaCSSmkpebi ngalabagzip compressionnkụnye eji isi meeisi isiokwuọba akwụkwọ n'ọbá akwụkwọimage mkpakọumengwụ loadingIdozi ibuibu ọsọibu ogenjikarịcha ekwentịcaching peejimmewere peejipeeji nke arịrịọarụmọrụọsọ ọsọ saịtịụdị mpempe akwụkwọsketịvideo mkpakọusoro vidiyoarụmọrụ weebụọsọ ọsọ na ebe nrụọrụ weebụwebsaịtị ibu oge
Gini bu usoro nzipu ọdịnaya (CDN)?
Gịnị Bụ asịwo Personas? Gịnị Mere Ha Ji Dị Ha Mkpa? Na Kedu ka I si kee ha?
Aug 6, 2015 na 11: 13 AM
Nna m ukwu,
Ekwenyere m na isi ihe iri na abụọ akọwapụtara.
Maka ịzụ ahịa weebụsaịtị, ana m atụ aro ka ị kwafe na Bochum ekesara gaa na VPS ma ọ bụ WordPress Bochum, ma soro ihe edepụtara n'elu.